Waa Maxay Saameynta Xeeladaha Micro-Micro iyo Saameynta-Macro | Martech Zone
Khamiista, Sebtember 14, 2017 Douglas Karr
Suuqgeynta saameyntu waxay ku taal meel udhaxeysa ereyga-afka ee aad ku kalsoon tahay iyo xayeysiinta lacag bixinta ah ee aad geliso degel. Saameeyayaashu badanaa waxay leeyihiin awood weyn oo ay ku dhisaan wacyiga laakiin waxay u dhexeeyaan awooddooda inay dhab ahaantii saameyn ku yeeshaan rajada go'aanka iibsiga. In kasta oo ay tahay ka sii talo gal badan, istiraatiijiyad soo jiidasho leh si aad u gaarto dhagaystayaashaaga muhiimka ah marka loo eego xayeysiiska xayeysiinta, suuq geynta saamaynta waxay ku sii socotaa caan.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira isku dhac ku saabsan in maalgashigaaga suuq geynta saamaynta sifiican loogu kharash gareeyay wadar ahaan tiro badan xiddigo dhowr ah - saamaynta dhakada, ama haddii maalgashigaagu sifiican loogu kharash gareeyo niche badan, xoog saareyaasha diirada saaraya - saamaynta micro.
Miisaaniyad ballaaran oo lagu kharash gareeyey saamileyda saamileyda ah ayaa hoos u dhici karta waxayna noqon kartaa khamaar weyn Ama miisaaniyad ballaaran oo lagu kharash gareeyay inta udhaxeysa saamileyda yar yar ayaa laga yaabaa inay adkaato in la maareeyo, la isku duwo, ama la dhiso saameynta aad dooneysay.
Waa maxay Micro Influencer?
Waxaa laygu sifeyn lahaa sidii micro saameyn yar. Waxaan si gaar ah diiradda u saarayaa tikniyoolajiyadda suuq geynta oo waxaan kor ugu qaadayaa ilaa 100,000 oo qof iyada oo loo marayo bulshada, webka, iyo emaylka. Awooddeyda iyo caanabeynteyda kama dhaafeyso diiradda nuxurka aan abuuray iyo; Natiijo ahaan, sidoo kale kalsoonida dhagaystayaashaydu iyo saamaynta ay ku yeelan karaan go'aan iibsi.
Waa maxay Saameyn-yahanka Makro?
Saameeyayaasha makro-ku waxay leeyihiin saameyn ballaaran iyo shaqsiyan. Caan caan ah, suxufiga, ama xidigta baraha bulshada ayaa noqon kara saameyn macro (haddii ay ku kalsoon yihiin oo ay ka helaan dhagaystayaashooda). Mediakix wuxuu qeexayaa qaybtan marka loo eego dhexdhexaadinta:
Saameynaha dhaqaatiirta ee 'Instagram' guud ahaan wuu yeelan doonaa ka weyn 100,000 raacsan.
Saameynaha dhaqaatiirta ee Youtube ama Facebook waxaa lagu qeexi karaa inuu leeyahay ugu yaraan 250,000 macaamiil ama jecel yahay.
Mediakix wuxuu falanqeeyay in kabadan 700 oo ay maal galisay dhaqaatiirta 'Instagram' ee ka imanaya 16 magacyada sare ee lashaqeeya saamileyda yar yar iyo kuwa saamaynta yar ku leh si loo qiimeeyo xeeladaha wax ku oolka ahaa. Waxay soo saareen infographic this, ka Dagaalkii Saameeyayaasha: Macro iyo Micro oo la imow gabagabo xiiso leh:
Daraasaddeenu waxay muujineysaa in saameynta makro iyo waxqabadka saameynta yar ay qiyaas ahaan le'eg tahay marka la qiimeynayo iyadoo lagu saleynayo kaliya heerka ka-qaybgalka. Intaa waxaa sii dheer, waxaan ogaanay in saamileyda makro-gu ay ku guuleystaan ​​marka la eego wadarta jecel, faallooyinka, iyo gaarista.
Waan awooday inaan la xiriiro Jeremy Shih oo aan waydiiyo su'aasha xiisaha leh - ku soo noqo maalgashiga. Si kale haddii loo dhigo, iyadoo la fiirinayo ka-qaybgalka iyo waxyaabaha la jecel yahay, ma waxaa jiray farqi la cabirayo oo muujinaya tilmaamayaasha waxqabadka muhiimka ah sida wacyi-gelinta, iibka, kacdoonka, iwm.
Waxaan dhihi karaa dhaqaalaha miisaanka ayaa runtii ku ciyaaraya halkan macno ahaan in ay fududahay (waqti yar iyo xawaare dheereyn ballaadhan) in lala shaqeeyo in yar, oo saameyn weyn leh marka loo eego isku dayga isku-duwidda boqolaal ama kumanaan saamileyaal yar yar si loo gaaro isla gaadhitaanka. Intaa waxaa sii dheer, CPM waxay u egtahay inay hoos u dhacdo markaad la shaqeyneyso saameyn badan.
Waa lagama maarmaan in suuqleyda ay tan maskaxda ku hayaan maaddaama ay eegaan suuq-geynta saamaynta leh. In kasta oo isuduwidda ballaaran iyo ololaha cajiibka ah ee saameynta yar-yar ay saameyn weyn ku yeelan karto gunta hoose, haddana dadaalka lagama maarmaanka ahi uma qalmo maalgalinta waqtiga iyo tamarta. Sida waxkasta oo suuq geynta ah, waxaa haboon in la tijaabiyo laguna hagaajiyo istaraatijiyadaha ololahaaga.
Waxaan u maleynayaa inay sidoo kale muhiim tahay in maanka lagu hayo in tani ay salka ku heyso Instagram oo aysan aheyn dhexdhexaadiyaal kale sida blogging, podcasting, Facebook, Twitter, ama LinkedIn. Waxaan aaminsanahay aalad muuqaal ah sida Instagram inay qalloocin karto natiijooyinka falanqaynta sidan oo kale si weyn ugu daneyneysa caanka.
Tags: maraykanka ragi ciejajabiddaniel WellingtongillettekhuseysaainfographicInstagramsaameyn macromediakixsaameyn yarnordstromsephora
Oktoobar 7, 2017 at 2:19 AM
Saameeyayaashu shaki kuma jiro inay qayb muhiim ah ka yihiin istiraatiijiyadda suuqgeynta, gaar ahaan xaaladda B2B. B2B iibsadaha go'aanka, go'aaminta hoggaanka iibiyuhu waa furaha. Haddii saamileey ahi u dammaanad qaadi karo iibiyaha waxay ku darsaneysaa kalsooni dheeri ah. At ThoughtStarters (www.thought-starters.com) waxaan si dhow ula shaqeynay shirkado badan oo caalami ah oo ka caawinay inay qeexaan & maamulaan barnaamijyadooda ka qayb qaadashada saamaynta & waxaan aragnaa in marar badan ay ku fashilmaan inay aqoonsadaan dhamaan saamileyaasha. Tusaale: Macaamiil caalami ah oo horseed u ah waxaan ogaanay in Academia ka socota jaamacadaha hogaaminaya loo isticmaali karo saameyn wax ku ool ah. Waxaan dhignay barnaamij iyaga la shaqeynayay & tan macmiilku wuxuu awood u yeeshay inuu furo wadooyin cusub oo aan horay looga fikirin istiraatiijiyadooda kaqeybgalka saameynta & sidoo kale wuxuu bilaabay inuu gurto ROI. Markaa waxay muhiim u tahay shirkadaha inay aqoonsadaan la-hawlgalayaasha ka caawin kara iyaga inay ka helaan faa iidooyin badan istiraatiijiyaddooda ka-qaybgalka saamaynta.